မျိုးသာကီအတွက် ရဲဝံ့ ဒို့ အာဇာနည်: ဂဒါဖီ အခြေအနေ၊ နောက် ၁ လတော့ ခံနိုင်ကောင်းပါရဲ့ “၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ လူအခွင့်အရေး၏ တိုက်ပွဲနှစ်” မြန်မာ့သွေးအနီရောင် မညစ်စေနဲ့ ။ စစ်ကျွန်ဘ၀လွှတ်မြောက်ကြဖို့တော်လှန်ှရေးသို့့ အသင့်ပြင်
ဂဒါဖီ အခြေအနေ၊ နောက် ၁ လတော့ ခံနိုင်ကောင်းပါရဲ့
The BBC's John Simpson in the nearby city of Ajdabiya says the 100-vehicle convoy is expected to advance towards it, and have bombed an arms dump there.
The city's defenders are inahigh state of excitement and expecting an attack, our correspondent says.
In two weeks of unrest Col Gaddafi has lost control of large parts of Libya.
Our correspondent says Brega was defended byahandful of lightly-armed rebels, but Ajdabiya is much more important target.
The rebels are determined to put upafight but it remains to be seen whether this translates into an organised defence of the city, our correspondent says.Rest of your post၏